Super PPR Fibhi Girazi Pipe Line Yeyedzo Yakabudirira - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Super PPR Fibhi Girazi Pipe Line Yeyedzo Zvakabudirira
Nguva: 2018-09-15 Hits:
FR / PP-R mapaipi akakwirira ekuita mapaipi akagadzirwa pakadzika tembiricha uye nekukasira kumhanya kuburikidza neakasarudzika maitiro uye zvigadzirwa uchishandisa yakawanda-rukoko co-extrusion. FR / PP-R pombi rudzi rwe fiberreinforced polypropylene pombi. Mavara maviri emukati nekunze akagadzirwa nePP-Rmaterial. Iyo yepakati rukoko inoumbwa nekuwedzera girazi fiber pane baseof PP-R. Inofananidzwa nePP-R pombi, FR / PP-R pombi ine girazi faibha yakasimbiswa pakati, ndokuti, pahwaro hwepombi PP-R pombi, inosimudzira kuomarara, kupenya kwechiedza uye kubvumidzwa kwemhepo, uye kuita kwayo kwakanyanya kupfuura iyo yePP-R pombi. Iine hunhu hwepasi pekuwedzera kwekuwedzera coefficient, iyo inogadzirira kukamurwa kwePPR pombi inpractical application.
Munguva pfupi yapfuura, JWELLMachinery's PPR / FR-PP Pipe Extrusion Line iyo inogadzira yeAmerican vatengi, rave richimhanya zvinobudirira mufekitori yeShanghai JWELL MACHINERY. Iyo yekumhanya nzira irikubudirira kwazvo.Kushanda kwetambo yekugadzira kwakadzikama zvakanyanya uye kwakatsetseka, vane madepipe zvigadzirwa zvine yunifomu ruvara, inopenya uye yakachena pamusoro uye stratifiedprecision.
1) Manufacturedat yakadzika tembiricha uye yakakwira kumhanya kuburikidza neakasarudzika maitiro uye zvishandiso usingmulti-layer co-extrusion.
2) Specialscrew dhizaini kurwisa PPR / FR-PP pombi zvinhu.
3) Advancedand Patent extrusion kufa musoro dhizaini kurwisa PPR / FR-PP mapaipi.
4) Precisecontrol yeukobvu uye kuisa mapaipi.
5) Advancedautomatic mvura inopa uye kudhiraina kutonga uye kutenderera kwemvura tembiricha kudzora. Iyo inotonhorera mhedzisiro yakanaka. Iyo yekumusoro mutsara kumhanya inosvika ku20M / min.
6) Mutsara wetsamba wakagadzirirwa kushanda otomatiki uyo unovimbisa kutendeseka uye kwakachengeteka.
7) Kuburitswa kwevazhinji vanobuda kunonzwisisika uye nzvimbo inogarwa ishoma.
8) Ukobvu hwechigadzirwa hunogona kusvika 160 SDR7.4.
Pipe Ficha & Kushanda
1,Pipe Ficha & Kushanda
1) PPR / FR-PP pombi inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa magetsi, kupisa kwemagetsi simba, kudziyisa sisitimu uye kupihwa mvura nekuda kwekumanikidza kwayo uye kupisa kwekushisa, refu operationallife span, simba rakakura uye kusagadzikana kwekukanganisa, uye kudzivirira kwekupomba kwepombi.
2) Nekuda kwesimba rayo repamusoro, PPR / FR-PPpipe inogona kuchengetedza yakawanda mari yeinjiniya, uye chengetedzo inovimbiswa kwazvo.Naizvozvo, PPR / FR-PP ikozvino ine tsika yekutsiva PPR. Iyo inyanzvi yekugadzira mapaipi epurasitiki munguva nyowani.
KUMASHUREVagadziri vekumusoro-soro kwekudzivirira kwepombi michina---Shanghai Jwell Machinery
NEXTPe Mhepo Kufefetedza Pombi Extrusion Mutsetse Kumhanya Zvinobudirira Mune Iyo Fekitori yeShanghai JWELL MACHINERY